Wararka - Ka-hortagga isticmaalka bacaha tiirka hawada
Saamaynta ilaalinta ee barkintabacda tiirka hawadaruntii waa wanaagsan tahay, laakiin waxaa sidoo kale jira cillad, taas oo ah, laga soo saaro filim caag ah, dad badan ayaa og in filimka caagga ah uu leeyahay cillad si fudud u daloolinaysa oo ay waxyeello u geystaan ​​walxaha fiiqan, sidaas darteed bacda tiirka hawada ayaa sidoo kale leh faa'iido darrooyinkan, in Intaa waxaa dheer, waxqabadka barkinta ee tiirka hawada waxay ku xiran tahay cadaadiska hawada si loo sameeyo tartiib tartiib ah.
Intaa waxaa dheer, waxqabadka barkinta ee tiirarka hawadu waxay ku xiran tahay samaynta lakabka barkinta cadaadiska hawada si looga ilaaliyo alaabta baakadaysan waxyeellada dibadda.Sidaa darteed, haddii bacda tiirka hawada ay saamayso shay la mid ah fiiqan, bacda way dhaawacmi doontaa oo way daadanaysaa, dib looma isticmaali karo.
Iyadoo ay weheliso isticmaalka baahsan ee hawadabacaha tiirkaWarshadaha kala duwan, dad badan oo badan ayaa ogaanaya bacaha tiirarka hawada, laakiin habka isticmaalka ayaa la kulmi doona dhibaatooyin kala duwan.
Sida xirfadle soo saaraha ah ee barkinta tiirka hawada, waxaan ka wada hadalnaa oo wadaagnaa isticmaalka bacaha tiirarka hawada iyo arrimaha ay tahay in lagu xuso habka isticmaalka.
1. Isticmaalka habka waa in aanu yeelanin qalab fiiqan oo lagu tooriyo, daabyo iyo xagashada cidiyaha.
2. Waxay u baahan tahay jawi shaqo oo nadiif ah, ha isticmaalin sanduuqa dibadda ee cidiyaha, hawlwadeenku waa inuusan ka tagin ciddiyaha, xirtaan dahabka, dhulka laguma jiidi karo bacaha hawada iyo hawlaha kale ee aan caadiga ahayn.
Labada qodob ee kor ku xusan si ay uga hortagaan jebinta hawadabacaha tiirka, waxyeelada ay keento ilaalinta aan habboonayn ee alaabta.
3. Waa in aad ka taxadirtaa marka aad furaysid baakadaha dibadda, ha xoqin bacaha la buufin karo, mar labaad ayaa dib loo isticmaali karaa.
4. Waa in lagu dhaqmaa si waafaqsan cadaadiska sicir bararka.
5. Isticmaalka matoorada hawadu waa in ay fiiro gaar ah u yeelato in qaylada ay buuxinayso shuruudaha deegaanka si looga hortago wasakhowga sanqadh ka dhasha sawaxanka xad dhaafka ah.
6. Haddii khadka wax soo saarka uu si joogto ah u buufiyo, si loo tixgeliyo in sahayda hawadu ku filan tahay, haddii bamka hawadu uu buuxin karo shuruudaha isticmaalka, si looga hortago wax yar oo la buufiyo saameynta xoogagga dibadda, waxay keeni kartaa shil toos ah alaabta.
Waqtiga post: Dec-09-2021